YIWU TOYS MARKET PRODUCTS - Yunis International Trading Co., Ltd.
Janny Ding (Onye njikwa) +8615958903797
Lee ụdị niile
Mat ahaziri iche
Pvc Cost Mat
Roba Azụ Doormat
Ihe Mere Anyị
Ifuru Ifuru Artificial Ifuru
YIWU BAGS NA SUITCASES MARKET FEATURES
YIWU SCARF NA SHAWLS MARKET INPLODU
YIWU TOYS MARKET AKUKO
Ihe ndị eji eme ụmụaka bụ ihe ụmụaka nwere ụmụaka, ihe eji egwuri egwu, ihe egwuregwu ụmụaka, ihe ụmụaka ji egwuri egwu, ihe ụmụaka ji egwuri egwu, ihe ụmụaka ji egwuri egwu, ihe ụmụaka ji egwuri egwu, ihe ụmụaka ji egwuri egwu.
YIWU TOYS MARKET AREA
1. Egwuregwu nke 1, Mpaghara 1, ahịa azụmaahịa mba: Plus ụmụaka ji egwuri egwu (Mpaghara C), ụmụaka nwere ihe egwuregwu ụmụaka (Mpaghara C), ihe egwuregwu ụmụaka (Mpaghara C na D), ihe egwuregwu ụmụaka (Mpaghara D na E).
2. Yiwu mba azụmaahịa obodo 1: Ala mbụ na-ere ihe ụmụaka ji egwuri egwu. Ala dị larịị bụ ebe etiti na-emepụta ihe, bụ nke na-ere nnukwu ngwongwo.
Yiwu mba ahia mpaghara obodo 1: Mpaghara B Plush ụmụaka ji egwuri egwu kpuchie Booth No.601-1200, ihe egwuregwu ụmụaka C Plush, ụmụaka nwere ihe egwuregwu ụmụaka na-egwuri egwu na akwa egwuregwu elektrọniks Booth No.1201-1800. Ihe ndị eji egwuri egwu Mpaghara Mpaghara Kọmputa na ihe egwuregwu ụmụaka n’egwuregwu kpuchie Booth No.1801-2400, Ihe eji egwuri egwu mpaghara E Brọọ No.2401-3000.
3. Ọtụtụ ihe ụmụaka ji egwuri egwu dị ukwuu na ezigbo ihe egwuregwu sitere na Guangzhou ma ọ bụ ahịa Chenghai.